सेयर बजारमा बीमा समुहमा सुधारउन्मुख, नेप्से परिसूचक ३३.६१ अंकले बढ्यो - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सेयर बजारमा बीमा समुहमा सुधारउन्मुख, नेप्से परिसूचक ३३.६१ अंकले बढ्यो
काठमाडौं । सेयर बजारमा बीमा समुहमा सुधारउन्मुख देखिदाँ नेप्से परिसूचक ३३.६१ अंकले बढेको छ । बीमा समुह ३६०.४३ अंकले बढेको छ । जसको कारण समग्र सेयर बजार नै उकालो लाग्यो । यस्तै लघुवित्त १२०.११ अंकले बढेको छ । यस्तै बीमा,माईक्रोफाइनान्स र होटल समूहमा आएको उच्च सुधारले समग्र बजारमा उकालो लागेको हो ।
सेयर बजारमा आज ९६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । २०७४ को फागुन र चैतमा घटेको सेयर बजार २०७५ को बैशाखको सुरुवातसँगै बढेको छ । खासगरी लामो समयदेखि सेयर बजार घटेको हुँदा लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको छ । जसको कारण सेयर बजार बढेको छ ।
मंगलबारको सेयरबजारमा कुल १६६ कम्पनीको कारोबार भएकोमा १५३ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने १३ कम्पनीको मात्र सेयरमूल्य घटेको छ । यसदिन १८ कम्पनीको सेयरमूल्य दश प्रतिशतकै हाराहारीमा बढेको छ ।
मंगलबार कारोबारमा आएका दश समूह मध्ये व्यापार बाहेक सबै सबै समूहका सूचक उकालो लागेपछि बजार दोहोरो अंकले बढेको हो । १६६ कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा १९ लाख १० हजार कित्ता सेयर ९६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा भन्दा ३९ करोड बढी हो । नेप्से इण्डेक्स् र कारोबार रकममा आएको समानान्तर वृद्धिले बजार सकारात्मक दिशामा जाने संकेत देखिएको छ ।
यसदिन पनि बीमा कम्पनीको सूचक सबैभन्दा धेरै ३६० अंकले बढेको छ । माइक्रोफाइनान्स समूह १२०.११ अंक, बैकिङ समूह १२.२ अंक, होटल समूह ८६.०१ अंक, विकास बैंक समूह ३५.५१ अंक, जलविद्युत समूह ४०.८२ , बित्त समूह ८.९४ अंक, उत्पादनमूलक ५४.९९ अंकले बढ्यो । अन्य समूहको २१.९९ अंकले बढ्दा व्यापार समूहको सूचक भने ५.५७ अंकले घटेको छ ।
बजारमा उच्च सुधार आउँदा धेरै कमाउने र कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको सूचिमा मंगलबार पनि बीमा समूहकै बाहुल्यता देखिएको छ । केही माइक्रोफाइनान्स र होटल समूहका कम्पनीहरु पनि सेयरमूल्य उच्चदरले बढेको छ ।
यसदिन सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा धेरै ५ करोड ९८ लाखको कारोबार भयो । ४० प्रतिशत हकप्रद सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन परेकाले सूर्याको उच्च कारोबार भएको हो । नेपाल लाइफ र कुमारी बैंकको पनि तीन करोड बढीको कारोबार भयो । नागरिक लगानी कोष, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, फर्स्ट माइक्रो लगायतका कम्पनीको उच्च कारोबार भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको उपलक्ष्यमा आयोजित ऐतिहासिक स्वागत समारोहमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै […]
नेपालको समस्याप्रति एनआरएनको यस्तो चिन्ता
असोज १३ । काठमाडौँ, गैरआवासीय नेपाली सङ्घले देशमा भइरहेको वर्तमान असहज अवस्थाको अन्त्य गर्न नेपाल र भारत […]
प्रियंका चोपरा राती किन सुत्दिनन्?
एजेन्सी, भारतमा कम र अमेरिकामा बढी बस्दै आएकी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपराले आफू रातमा निकै कम सुत्ने […]
असार १८, काठमाठौं । उपत्यका प्रवेश गर्ने चार वटा नाकामा गाडी धुने (कार वासिङ) मेसिन जडान गरिने भएको छ । […]
अंगीकृतले राष्ट्रपति ताक्ने? अध्यक्ष ओली
असोज ७ । काठमाडौँ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको बेला जे गरेपनि हुन्छ […]
कुनै जिल्लामा पनि चुनाव सार्न सकिदैन :आयोग
असार १ । काठमाडौं, निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा हुन लागेको स्थानीय चुनाव कुनै जिल्लामा पनि सार्न नमिल्ने […]